Nhau - 8 mazuva ekuverenga! S-conning inokukoka iwe kuShanghai CPhI & P-MEC China!
Mazuva masere kuverenga! S-conning inokukoka iwe kuShanghai CPhI & P-MEC China!
P-MEC China, chiratidziro chepasi rose chinobatanidza mabhengi epasi rose anotungamira uye emabhizinesi ane mukurumbira emuno, achaitirwa muShanghai New International Expo Center kubva muna Zvita 16 - 18th 2020. Pano, iwe uchaona zvigadzirwa zvitsva zviripo nevatungamiriri vanogadzira zvigadzirwa zvekugadzira uye kurongedza zvishandiso, tsvaga mhinduro dzekumashure-kumagumo kurongedza.
S-conning tekinoroji yeboka Ltd.
Booth Nha .: N1 E68
Nguva: 16th - 18th 2020
Parizvino mamodheru: S400 yakakwira kumhanya yakangwara gungano & yekunyorera sisitimu yemapiritsi akafuridzirwa akaraswa, dendere-kubvisa, kuongororwa kwerambi uye chikuva chikuva.
Mazuva ano nyika irikutambura neCOVID-19, iine kudiwa kwekukurumidza kwevhavhavha yeCOVID-19, S-conning yakagadziridza hunyanzvi hwemapiringi akanyorwa mazita, yakawedzera kugadzikana kwekuita, yakavimbisa kuburitswa kwemhando yepamusoro yemishonga michina, ichiita rakakosha basa mukugadzirwa kwakawanda kweiyo COVID-19 jekiseni munguva yakakosha.
Parizvino mamodheru: S308 Rotary yakatwasuka yakatenderera bhodhoro Kunyora Muchina (Cartridges)
Chigadzirwa chega chega uye zvese zvakagadzirwa kubva kuS-conning zvine rukudzo rwedu rweSainzi Yezvekurapa, pamwe nekushushikana kwetekinoroji, kudzora kwedu kwakasimba nemhando dzemuchina uye vimbiso yedu nekuchengetedza kwevashandisi. Muchiratidziro ichi, S-conning icharatidza kusiyana kwechigadzirwa kusimbisa kuzvikoshesa kwedu, uye zvakare iri tsime risingaperi rekuvapo kwenyika dzese.
S-conning Technology Boka Ltd, ndeimwe yeakanyanya michina inogadzira michina, yakagadzwa muna 2010, yakanyatsozvipira kune Yakakwira-kumagumo yakagadziriswa maindasitiri otomatiki uye smartization.
Kambani headquarter iri muGuangzhou Science City. Iyo fekitori inovhara nharaunda yemazana mashanu emamirimita emamirimita, iine hunyanzvi hofisi nharaunda uye wakapamhama yekugadzira mashopu. Kuburikidza ne ISO9001 yemhando system chitupa uye CE chitupa, isu tiri kusangana ne: kugadzirwa, kutsvagisa nekusimudzira, kutengesa uye mushure mekutengesa sevhisi, isu tinopa yakazara yakazara huwandu hwekuchenjera kunyora / kurongedza mhinduro uye zvakagadziriswa masevhisi emishonga, ezuva nezuva kemikari, chikafu, makemikari, emagetsi, uye emafodya maindasitiri.
S-conning tech inopfuura makore gumi ekufambira mberi, Tichifunga nezvekushanda kwemhando yemidziyo, nekuteedzera UEO (Yekushandisa ruzivo rwekugadzirisa), uye kugara uchivandudza dhizaini uye kukwana kwezvigadzirwa; inogara isingagumi hunyanzvi, yemarudzi maitiro, S-conning yakawana akati wandei ekugadzira uye ekugadzira patent, iyo yepamberi-yakazadza majekiseni gungano & yekunyorera muchina uye akangwara kurongedza muchina. zvinopa zvakanakisa zvigadzirwa uye yakadzama mushure-kutengesa sevhisi kune vedu vekupedzisira-vashandisi ndiko kutsvaga kwekusingaperi kweS-conning kugara uchizadzisa zvinotarisirwa nezvinodiwa zveindasitiri.
Plaka yekuisa chisimbiso Machine, Pamusoro Uye Pazasi Labeler, Syringe Assembly Uye Kunyora Sisitimu, Yekutengesa Bhodhoro Kunyora Muchina, Label Printer Yezvizoro Zvirongo Mabhodhoro, Label Anonyorera Mashini Emabhokisi,